Pano isu tine zvachose yakasviba iPhone 7 kesi | IPhone nhau
Uye kupedzisa pasuru, pano tine nhema iPhone 7 kesi
IPhone 7 nhema pfungwa
Munguva pfupi yapfuura, iyo mwero uyo "kudonha" kuoneka kwawedzera zvakanyanya. Nezuro akaonekwa mifananidzo ye iPhone 7 mamaboardboard nguva pfupi mushure mekunyora kwaMark Gurman chinyorwa umo maakasimbisa dzinenge runyerekupe pamusoro pake iPhone 7 uye iPhone 7 Uyezve. Rimwe zuva risati ratobudiswa mufananidzo imomo mataigona kuona matereti matema eSIM kadhi.
Ini ndanga ndichitaura nezve rwiyo rwekuvuza nekuti nguva pfupi yadarika zvakare chitunha chabuda iPhone 7, chimwe chinhu chingadai chisina kana chakakosha dai chisiri chevara chayo. Sezvauri kuona mumufananidzo unotevera, iyo casing inogadzirwa ne vara iri nhema, iyo yaizosimbisa runyerekupe rwekuti iyo iPhone 7 ichave iripo nhema uye kwete munzvimbo imwechete grey iyo yatiperekedza isu muma iPhone 5s, iPhone 6 uye iPhone 6s.
Iyo iPhone 7 ichave iri nhema ... kana bhuruu?
Mufananidzo uri pamusoro uchangobva kuoneka pa Weibo, iyo Chinese Twitter, uye zvakange zvisiri pasina gakava. Iyo gakava raive risiri rekuti iwo mufananidzo ndewechokwadi here kana kunyepa, kusahadzika kunogara kuripo uye kwatinofanira kugara tichinetseka, kana zvisiri nekuti munyika yekudonha, sezvazviri mune zvese, kune vanhu vanoba izvo zvirimo uye kunyora kunopihwa, chimwe chinhu icho OnLeaks chave nebasa rekuparadzira mune ino uye zvimwe zviitiko.
Kusiya izvi zvakajeka, ndinodawo kutaura pamusoro pechimwe chinhu chinondirova: kana nyaya yacho yavhenekerwa nechiedza chine simba, senge mwenje wavakashandisa pakutora mufananidzo, tinogona kuona kuti ruvara rwayo Zvinoita kunge zvakanyanya kunge rakasviba bhuruu. Kana ndichifanirwa kutaura chokwadi, zvinogona kuve fungidziro yeyangu yakagadziriswa nerunyerekupe rwekuti iyo iPhone 7 ichazosvikawo neruvara rwebhuruu iyo kusvika parizvino isu taiziva seDef Blue.
Chero zvazvingaitika, ingave yakasviba bhuruu kana dema, zvinoita sekunge anotevera Apple 7 mafoni mafoni anosvika mune angangoita akasviba mumvuri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Uye kupedzisa pasuru, pano tine nhema iPhone 7 kesi
Zvichakwanisika, pamwe ... izvo hazvisi zvekutapa kana blog. Idzo ndidzo fungidziro, uye iwe wakabereka
Mumwe anonyora muzvinyorwa akazoramba mufananidzo uyo
Forvo Kududzwa kwemahara kwenguva pfupi
WhatsApp inodzoka ne "bugfixes" uye mashoma nhau